Daarood Dowlada uu rabo waa noocee | dayniiile.com
Home WARKII Daarood Dowlada uu rabo waa noocee
Beelaha Daroodka waa Dad ku Nool Dowladnimada inta badan aheyn kuwa xooga maalo waa tan keentay in marwalbo keentay in ay Dowlad raadiyaan walina xooga saaraan si ay hogaanka u qaban la hayeen si canshuurta Dalka ugu Nooladaan.
Beelaha Daroodka Xukunka ay raadinayaan xataa waxay u galaan in Dowlado Cadow ku raali galayeen si kursiga Noloshooda ku xiran ku helaan
Dowlada ay mar walba Doonayaan maaha mid Dalka iyo Dadka u roon waa mid la doonaayo in hal qoos uu ku noolaado.
Waxaa xasuus ah sadanada Daroodka si walba waa ku raadiyaa xataa Gumeysi hadoow dalka galaayo waxaana lagu xasuustaa Gumeysiigii Talyaaniga,qabsashadi Balaabal iyo Godogob Ciidamada Etoobiya soo galidii Etoobiyaanka Gobolka Geddo iyo Qabsashadii Ciidamada Etoobiya magaalada Muqdisho intaa dhacdo waxaa waday Masuuliyiin Darood ah.
Xukunka uu raadinaayo waa mid ay Nolol ku raadinayaan maaha mid Soomaliya loogu raadinaayo Hor mar taa waxaa Daliil u ah Dowlada hada jirta dhamaan masuuliyiintii Darood waxay ku soo hayaamay Muqdisho la dajiyey hoteelo qaali ah walina laguna quudiyo Hantida dadka shacabka looga qaado Canshuurta
Hadaba Darood ma noqon Doonaa mid ka fikira Dalka iyo Dadka mise waa mid ka fikira sidii ay ugu noolaan lahayeen hantida Daweynaha dalkana waligii ku sii jiri lahaa Hubaal la aan?
Previous articleFahad Yaasiin, waxba uma goyso Maxkamadda Sare ee dalka. Hayeeshee hadduu si dadban iyo meesha wax ka jiraan
Next articleBooliska Muqdisho oo qabqabtay dhalinyaro ka tirsan Ciyaal weerada (Sawirro)